ဒူဘိုင်းအတွက် Blockchain အတွက်အကောင်းဆုံး Certificate ဘာတွေလဲ? |
ဒူဘိုင်းအတွက်အမေရိကအလယ်ပိုင်း Blockchain ကောင်စီ
ကမ္ဘာ့ဖလား Disrupt မှ Blockchain နည်းပညာအသင့်ဖြစ်ပြီလား?
ကမ္ဘာကြီးကိုကမောက်ကမဖြစ်စေရန် Blockchain ကဘာလဲ?
What are the best Certifications in Blockchain in ဒူဘိုင်း?. Blockchain is လောကဓာတ်လုံးကိုထိခိုက် အဲဒါကိုရင်ဆိုင်တိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများလည်းပြတ်တောက်လျက်ရှိသည်အဖြစ်။ ဒါဟာတလျှောက်ကိုင်တွယ်ပုံကိုအွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အကြီးအကျယ်အလားအလာရှိပြီး ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အတူဒါကြောင့်အားလုံးအစုံဖြစ်ပါသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှောင့်အယှက်မှ, ဖျော်ဖြေရေးနဲ့တခြားကဏ္ဍများတွင်။
Blockchain ကွန်ယက်ကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ရွယ်တူဖြတ်ပြီးကျတ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့်တစ်ဦး middleman များ၏အခန်းကဏ္ဍရှင်းလင်းစေပါတယ်။ ဤ အမြန်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ရလဒ်တွေကို အနိမ့်ကြေး။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ cryptography ကို hash မြင့်မား, လုံခြုံပွင့်လင်း, နှင့်ပုဂ္ဂလိကအဆိုပါ blockchain စေသည်။
သင်ဖတ်ပါ စက်မှုလုပ်ငန်းဒီနည်းပညာကနေအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းနေကြသည်။ သငျသညျလညျးသိသင့် ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ blockchain နည်းပညာထံမှကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်။ သင်ဤအစွမ်းထက်နည်းပညာများအတွက်လမ်းလုပ်သင့်တယ်ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်ပါဝင်ပတ်သက်သင်တန်းသားများကိုဗဟိုရှင်းလင်းခြင်းအခွင့်အာဏာရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲအရောင်းအအတည်ပြုနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အောင်မြင်တဲ့ blockchain အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနိုင်ရန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလွယ်ကူသောတဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သင်နည်းပညာကိုင်တွယ်ထိုက်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြသည်ဟုအချို့သောကျွမ်းကျင်မှုအစုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, blockchain ကပုံပေါ်စေခြင်းငှါသကဲ့သို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းသင်လုံလောက်သောသင်ယူမှုတွေထိုးဖောက်အောင်မြင်ရန်သေချာစေမည်။ Blockchain အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန် အဖြစ်ကောင်းစွာဒူဘိုင်းအတွက်ယခုရရှိနိုင်ကြသည်။
သင်ဟာအခြို့သောအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့် blockchain အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ကိုကူညီကြစို့
Central Block Chain Council of America with ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ
ဒူဘိုင်းအတွက် Wollongong တက္ကသိုလ်မှ
ဒါကနည်းပညာလမ်းကိုပြောင်းလဲသွား စက်မှုလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်။ ဒါကမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများလယ်ဂျာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတဦးတည်းအဆင့်ကိုတက်၏ဂိမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ အတွက် Wollongong တက္ကသိုလ်မှ ဒူဘိုင်း has partnered with IBM’s skills academy to offeraBlockchain developer training program that touches the fundamentals of blockchain. It will polish your practical skills in the design and implementation of စီးပွားရေးလုပ်ငန်း blockchain-based solutions. After the completion of the program, your brain will be infused with an in-depth understanding of blockchain concepts.
ဒါဟာသင် shared လယ်ဂျာ၏သဘောတရားများကိုကျွမ်းကျင်စေမည်, တစ်ဦး blockchain ပလက်ဖောင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကို, Hyperledger Composer, blockchain ဖြန့်ကျက်ပြီးအများကြီးပို၏စွမ်းရည်များ။ Blockchain ပညာရှင်များကးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်သင်ယူသဘောတရားများကိုလျှောက်ထားရန်အလားအလာရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျလညျးသိသင့် အဆိုပါသင်တန်းနှင့်စာမေးပွဲအတွက်၏အောင်မြင်သောပြီးစီးပြီးနောက်သငျသညျ IBM ၏ Blockchain ရေးသားသူရဲ့ Mastery တံဆိပ်ကိုချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။
Meirc သင်တန်း & Consulting
Meirc သင်တန်းနှင့်အတိုင်ပင်ခံအသေးစိတ်နှင့်အမြင်အာရုံဆလိုက်အဖြစ်ဗီဒီယိုများအပေါ်မှီခိုတဲ့ blockchain masterclass သင်တန်းပေးထားပါတယ်။ ထို့အပွငျလက်တွေ့ကျတဲ့ဥပမာ, အုပ်စုတစ်စုဆွေးနွေး အများအပြားကပိုလေ့ကျင့်ခန်း။ ဒီတော့ယေဘုယျအားဖြင့်မြေတပြင်လုံးအစီအစဉ်၏ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်အတွင်းစေ့စပ်သငျသညျစောငျ့ရှောကျမညျဖွစျကွောငျး, စကားပြော။ သင်တန်း၏ပြီးစီးပြီးနောက်။ သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှု polish နှင့်အများပြည်သူနှင့်ခွင့်ပြု blockchains ၏အတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်နားလည်, blockchain အသုံးပြုမှု-ဖြစ်ပွားမှု၏ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကိုအကဲဖြတ်အကောင်းဆုံး blockchain ပလက်ဖောင်းကို select နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သင်န်ဆောင်မှုပါ သငျသညျဒီဇိုင်းအတွက်လိုလားသူဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်မည် blockchain ဖြေရှင်းနည်းများ။ အဖြစ်ကသင်သည် layout ကိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ် အဖွဲ့အစည်းအဘို့အအကောင်အထည်ဖော်မှုမဟာဗျူဟာများ.
သင်တန်းလေ့လာသုံးသပ်ဘို့ဖြစ်၏ကိုသတိပြုပါ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေသောမန်နေဂျာသို့မဟုတ် C-Level အမှုဆောင်အရာရှိ တစ်ဦး blockchain မဟာဗျူဟာ။ သင်၏အဖွဲ့အစည်းအတွက် blockchain ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်ပွင့်လန်းဖို့ဒီသင်တန်းကိုခင်တွယ်ပါ။
တစ်ဦးသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း blockchain ဖြစ်လာ သင်တန်းနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ် course offered by Learners Point Training Insititute to possess an in-depth understanding of what blockchain exactly is. The objective of the course is to provide you insights, make you fathom leading blockchain implementations, live demos of setting up own blockchain network, deployment of smart contracts and much more. The blockchain training program is for the Supply chain မန်နေဂျာ, Logistics Manager, ERP Consultant, အရောင်း Operations Manager ကို, Demand ကိုစီမံကိန်းမန်နေဂျာပစ္စည်းဝယ်ယူရေးမန်နေဂျာနှင့် Supply Chain ညှိနှိုင်းရေးမှူး။ တစ်ဦးဖြစ်လာ blockchain အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် and master all the things requiredabuildaရာထူး in blockchain.
အမေရိကအလယ်ပိုင်း Blockchain ကောင်စီ
CBCA ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီမှစီးပွားရေး Blockchain Professional ကအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းထောက်ပံ့ပေးစကားပြောခြင်း။ ထို့အပွငျခေတ်ပြိုင် blockchain သဘောတရားများကိုနားမလည်ဖို့လိုသူမည်သူမဆိုရန်။ ဥပမာအားဖြင့်, အခြေခံမူ, application များနှင့်နည်းပညာများကို။ သူတို့ကသူကိုအသိအမှတ်ပြုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြစ်လာ သက်သေကျွမ်းကျင်မှု get and are trusted enough to implement blockchain strategies in the organization. The course covers the blockchain concepts, as well as cryptocurrency concept, and structure, fundamentals of blockchain application. Moreover, leveraging blockchain in business, use-cases and managingablockchain project. It consists of the world’s most comprehensive resource. And generally speaking,abook that makes you prepared to tackle the challenges in the world of blockchain. And emerge asavictory.
Blockchain Institute မှနည်းပညာ (CBCP)
အဆိုပါ Blockchain Institute မှနည်းပညာကိုသင်နေတဲ့လက်မှတ်ရ Blockchain Professional က (CBCP) စေသည်။ ယင်း၏အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အတူထောက်ပြခြင်းနှင့် သင့်ရဲ့အသိပညာပိုကောင်းစေပါတယ် Blockchain နှင့် Bitcoin အခြေခံစည်းမျဉ်း၌တည်၏။ အဖြစ်, Cryptocurrency အခြေခံစည်းမျဉ်း, Bitcoin အဆင့်မြင့်အဆင့်။ အတူတူငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာနှင့် Blockchain အဆင့်မြင့်အဆင့်: Beyond Bitcoin ကိုသုံးသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုငျသညျကိုကူညီလိမ့်မယ် သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်သောလုပ်ပေးနိုင်ဖြစ်ကြောင်းလုံလောက်စွာပြင်ဆင်ထားရ အဆိုပါ blockchain ဘက်ပေါင်းစုံ applications များနှင့်အတူ။ အဆိုပါ Blockchain Institute မှနည်းပညာနှင့်အတူပြင်ဆင်ထား Get နှင့်ပွင့်လန်း သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း.
Blockchain အနာဂတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကညာဘက်အချိန် တစ်ဦးအကျိုးအမြတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင် ဤမြေကွက်၌နှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်၌အမြင့်ဆုံးပျံဝဲ။ ဒီတော့အတူနေတဲ့အခွင့်အလမ်းရ သင့်ရဲ့အခွက်တဆယ်တခုအဖြစ်မှပါဝါ အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်မှတဆင့်ရရှိခဲ့ !.
ကမ္တာ့ ဒူဘိုင်းအတွက် Blockchain ကောင်စီ
Is it legal in the ယူအေအီး?. ဟုတ်ကဲ့, ကဒူဘိုင်းအတွက် 100% စစ်ဆင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ထုတ်ဝေထောင်ပေါင်းများစွာ၏မရှိရာဒူဘိုင်းအနာဂတ် Foundation မှစစျဆေးနိုငျနှင့် blockchain အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစီးပွားရေးလုပ်ငန်း.
'' ဒူဘိုင်းအနာဂတ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ '' ပုံစံတစ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြန့်ချိခဲ့သည် ဒူဘိုင်း၏အနာဂတ်။ ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုလမ်းပြမြေပုံအဖြစ်ဒူဘိုင်းအနာဂတ်အစီအစဉ်၏ပစ်လွှတ်ဖယ်တလျှောက်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ထိုသူတို့ပုံဖော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အလတ်စားနဲ့ရေရှည်အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်ကဏ္ဍအနာဂတ် အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ။
Blockchain ပညာရှင်များအဘို့အအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန် ဒူဘိုင်းအတွက်
အမေရိကအလယ်ပိုင်း Block ကို Chain ကောင်စီ
ဒူဘိုင်းအတွက်အမေရိကအလယ်ပိုင်း Blockchain ကောင်စီ။ ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းအတွက် Blockchain အတွက်အကောင်းဆုံး Certificate ဘာတွေလုပ်နေလဲ ?. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အအောက်တွင်သင်ဖြေပါ။
အားလုံးကျွမ်းကျင်သူများဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒီတော့ဒါကိုစိတ်ထဲထားပြီး၊ သင်ယခုရနိုင်သည် လမ်းပြအာရပ်နိုင်ငံမှအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်များ စော်ဘွား သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။